Ambo (magaala) - Wikipedia
Godina: Shawaa Dhihaa
Aanaa: Ambo (aanaa)
Baayyina ummataa: 94 342 (2012)
Ambo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Magaalaan Amboo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Dhihaa kessatti argamti. Magaalaan kun Finfinneerra gara dhihaattii Kiilomeetira 125 fagaattee argaamti. Ol ka’iinsi lafaa naannoo Amboo meetira 2101 yeroo ta’u laatiitiyuudii fi loongitiyuudiin ishii 8059’N 37051’E ta'a.
Ambo waan baayyedhaan beekkamti. Kana keessa tokko hora (mineral water) Ambotti. Warshaan hora kanarraa Bishaan Amboo oomishu magaalaa Amboorraa kiilomeetira 5 fagaatee argama. Kan biraa dhagaa mana ijaarsaaf oolu dhagaan Amboos achumatti argama. Manneen naannoo sana baayyeen kan ijaarraman dhagaa Amboo kanaani.
Aanolee Shawaa Dhihaa
Ambo bishaan oo’aa(hot spring) lafa keessa burqu qabdi. Bishaan oo’aan kun bashannanaafis ta’ee fayyaa ofii eeguuf tajaajila guddaa kenna. Ambo naanno ishiitii iddoowwan turistii harkisan baayye qabdi. Kana keessa Finca’aa Gudar, Fincaa’aa Hulluuqaa, Haroo Wancii, fi kkf kaasuun ni danda’ama.
Ambo keessa Yuunivarsiitii tokkoo, manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa lamaa fi manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa baayyetu jira. Manni Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Amboo mannen barnoota gurguddo Oromiyaas ta’e biyyattii kessa jiran keessa tokko.
Akka lakkoofsa uummataa bara 2005tti, magaalaan Ambo uummata 49,421 qabdi. Uummanni magaalaa Amboo Oromummaa kan labsanii fi deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo(ABO) akka ta’an dubbatama. Kanaafis akka ragaatti kan kaafamu Mana Barumsa Sadarkaa 2ffaa Amboo keessatti baratoonni yeroo baayyee mormii mootummaarra qaban ibsaa turuu isaaniiti.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambo_(magaala)&oldid=37890" irraa kan fudhatame
Magaalota Shawaa Lixaa
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 27 Waaxabajjii 2022, sa'aa 22:07 irratti.